ISOMBULULO Impazamo "com.google.process.gapps inkqubo iyekile" | Iindaba zeGajethi
UIgnacio Sala | | Iiselfowuni, software, Tutorials
Enye yeengxaki i-Android ebisoloko ijongene nayo ngokuchanekileyo ukusukela oko yafika kwimarike, iyahambelana nezixhobo apho ifakwe khona, kuba ayenzelwanga ngokukodwa izixhobo ezithile, njengoko kunjalo nge-Apple ye-Apple kunye ne-iPhone. Oku, kwaye akukho enye, yeyona ngxaki iphambili abavelisi abahlangana nayo xa behlaziya izixhobo zabo kwiinguqulelo ezintsha, ukusukela Ayisiyiyo kuphela ekufuneka benze inguqulelo ye-Android kwizixhobo zaboKodwa kuya kufuneka bongeze umaleko owonwabisayo wokwenza umntu.
Kodwa nangona kunjalo, sinokuhlala sifumana ukungasebenzi kakuhle, nokuba kungenxa yenguqulo ye-Android engakhange ilungiselelwe ngokupheleleyo kwimodeli yethu yesiphelo, okanye ngenxa yokwahlulahlula ngokwezifiso. Enye yezona mpazamo ziqhelekileyo zichaphazela zombini usetyenziso kunye nokusebenza kwesiphelo. Kule nqaku siza kugxila kuyo Lungisa impazamo "com.google.process.gapps inkqubo iyekile", impazamo kwiimeko ezininzi ayisivumeli ukuba sikhuphele usetyenziso kwiVenkile yeGoogle Play.
Impazamo iqale ukubonakala kwi-Android Kitkat 4.4.2 kwaye ukusukela ngoko kubonakala ngathi abafana kuGoogle abakhange bazikhathaze ngokufumana isisombululo esingabanyanzeliyo abasebenzisi ukuba babhenele kwi-intanethi, kuba nakwiinguqulelo zamva nje ze-Android At Ixesha lokubhala eli nqaku sikulo Android 8.0 Oreo, iseyeyona ngxaki iphindaphindayo kwiziphelo ezininzi. Apha ngezantsi sikunika izisombululo ezahlukeneyo kule ngxaki, ukuthintela esona sisombululo siqatha ngamaxesha onke equka ukuseta kwakhona kanzima isixhobo kunye nokucima wonke umxholo wayo.
1 Sula i-cache yesicelo esinika iingxaki
2 Susa iiapps zakutshanje ozifakileyo
3 Cima uhlaziyo lwamva nje olukhuphelileyo
4 Hlela kwakhona ukhetho lweeapp
5 Cima idatha kwiinkonzo zikaGoogle
6 Ukuseta isixhobo kwakhona
Sula i-cache yesicelo esinika iingxaki
Ukuba le mpazamo yenzeka rhoqo ngalo lonke ixesha uvula isicelo, kunokwenzeka ukuba isicelo ngokwaso siso ukuqhekeka nenkqubo, ke inyathelo lokuqala ekufuneka silithathile cacisa i-cache yayo.
Ukucoca i-cache yesicelo, kufuneka siye kuseto> iiaplikeshini kwaye ukhethe usetyenziso oluchaphazelekayo. Xa ucofa kuyo, asiyi emazantsi kwaye Cofa kwiCache cache.
Susa iiapps zakutshanje ozifakileyo
Xa sifumana ingxaki kwisicelo ebesifakwe kwisixhobo sethu okwethutyana, kunokwenzeka ukuba ikwi Isicelo sokugqibela esisifakileyo, Into ngelishwa iqhelekileyo kwi-Android.
Ukusombulula le ngxaki yokusebenza, into yokuqala ekufuneka siyenzile yile khupha isicelo, ngokuthe ngqo ngokusebenzisa Useto> Izicelo, okanye ngesicelo somntu wesithathu esivumela ukuba senze lo msebenzi.
Cima uhlaziyo lwamva nje olukhuphelileyo
Ukuba ukusukela oko sifake uhlaziyo lwesicelo, sele iqalile ukusibonisa lo myalezo, ingxaki inokufumaneka kwifayile ye- ukuhlaziywa kokugqibela yesicelo esiyifakileyo, ke ukukhupha iingxaki, into yokuqala ekufuneka siyenzile kukususa uhlaziyo.
Ukukhupha uhlaziyo, sibuyele kuseto> Ukusetyenziswa kwaye ukhethe usetyenziso olunombuzo. Ngaphezulu, sifumana uMandla wokumisa ukhetho kunye Khupha uhlaziyo. Ngokukhetha eyokugqibela, isixhobo sethu siza kususa nawuphi na umkhondo wohlaziyo lokugqibela kwaye siyakushiya isicelo njengoko besinjalo ekuqaleni, xa besisebenza ngokuchanekileyo.
Hlela kwakhona ukhetho lweeapp
Isisombululo sokugqibela esisicebisayo, ngaphambi kokungena kwintoni inokuba ingumthombo wengxaki kwaye ayihambelani nezicelo ngokuthe ngqo, kodwa kwinkqubo, sinokusetha kwakhona ukhetho lwezicelo. Ukuseta kwakhona ukhetho lwezicelo esiya kulo Useto> Izicelo kwaye ucofe Zonke iithebhu.
Emva koko, siya kwimenyu ekwikona ephezulu ngasekunene kwesikrini, emelwe ngamachaphaza amathathu athe nkqo, kwaye ukhethe Hlela kwakhona ukhetho. Ngaphambi kokuqinisekisa inkqubo, i-Android iya kusibonisa umyalezo oqinisekisa ukuba ukhetho lwazo zonke iinkqubo ezikhubazekileyo ziya kubuyiselwa, izaziso zezicelo ezikhubazekileyo, usetyenziso lwezenzo ezimiselweyo, izithintelo zedatha yangasemva yezicelo kunye nazo zonke izithintelo zemvume.
Nje ukuba siyenze le nkqubo, kwaye siqinisekisile ukuba isicelo esisinike iingxaki siphinde sasebenza njani, kufuneka kwakhona setha useto ngokukodwa Isicelo ngasinye sasinokufikelela kwindawo, idatha yedatha ...
Cima idatha kwiinkonzo zikaGoogle
Ukuba emva kokuzama zonke iindlela zangaphambili, yonke into ibonakala ibonisa ukuba ingxaki ayihlali kwizicelo ngokwazo, kodwa siyifumana kwiinkonzo zikaGoogle. Iinkonzo zikaGoogle zokudlala sisicelo senkqubo ye-Android leyo ivumela ukuba nazo zonke iinkqubo zenkqubo soloko ihlaziyiwe kwaye baqinisekisa ukuba zonke izicelo zihlala zihlaziywa kwinguqu yakutshanje ekhoyo.
Ngokwenza oku, lonke ukhetho kunye noseto olusetelwe kuGoogle Play luya kucinywa. ukubuyisela useto olungagqibekanga. Ukucima idatha kwiinkonzo zikaGoogle, siya kuseto> Izicelo kwaye ucofe kwiiNkonzo zikaGoogle zokuDlala. Okulandelayo siya kucima idatha, ngaphakathi kwecandelo lokuGcina kwaye siqinisekise ukucinywa kwayo yonke idatha kwesi sicelo ngokusisigxina.
Ukuseta isixhobo kwakhona
Ukuba akukho nanye kwezi ndlela elungisa ingxaki com.google.process.gapps, kunokwenzeka, nangona kungenakulindeleka, ukuba ingxaki ikwi uhlaziyo lokugqibela isixhobo esifunyenweyo, ukuze siyilawule, kufuneka sisete kwakhona isixhobo. Ngokwenza le nkqubo, isixhobo siza kubuyela kuhlobo lwangempela lwe-Android esize ngayo kwintengiso.
Ukuze sibuyisele useto lwefektri yesixhobo, kufuneka siye kuseto> Backup kwaye usete kwakhona kwaye ukhethe ukhetho Ukuseta kwakhona idatha yeFektri. Le nkqubo iyakucima zonke izicelo, kunye nazo zonke iifoto kunye nedatha ekwi-terminal, ke okokuqala kufuneka senze ikopi yayo yonke idatha esifuna ukuyigcina, ngakumbi iifoto kunye neevidiyo esizithathileyo. ngesixhobo, ukusukela mva akuyi kubakho ndlela yokuzibuyisa a posteriori, kwizicelo ezininzi esizivavanyelayo.
Olunye ukhetho lokwenza ikopi kukufaka imemori khadi kwisixhobo kwaye uhambise yonke imifanekiso kunye neevidiyo, kunye nedatha, esifuna ukuyigcina, ukuze siyibuyisele ezandleni xa sibuyisela isixhobo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » Iiselfowuni » Uyilungisa njani inkqubo "com.google.process.gapps iyekile" impazamo
Molo, ndiyifumana lempazamo kodwa ayindivumeli nokuba ndingene kuseto okanye naphina kuba umyalezo uyavela kwakhona ... ukuba ukwiseto ... Isisombululo osinika kule forum asisebenzi kum. Ngaba ikhona ifomula yokuseta kwakhona itafile yefektri ngaphandle kokufaka naluphi na ukhetho? kuba andisiboni esinye isisombululo ... ukuba uyazi nasiphi na esinokusixabisa ukuba ungandinceda
Ndivumelana nezimvo zangaphambili, kwaye inkcazo abayinikayo ayinangqondo kuba ukuba ingxaki kukuba ayiniki ukufikelela kuba isicelo simisiwe, into oyithethayo ayinangqondo kuba umntu ungena njani ukucima idatha ye-cache, ukuba nganye isicelo sikuxelela ngokufanayo,
Ndiyavuma amagqabantshintshi angaphambili, kwaye inkcazo abayinikelayo ayinangqondo kuba ukuba ingxaki kukuba ayinikezi ukufikelela kuba isicelo simisiwe, ayisiyongqondo into oyithethayo kuba umntu ungena njani ukucima idatha ye-cache, ukuba nganye Isicelo sithetha okufanayo, mmmmm
I-HTC iphulukana nesebe layo le-R & D endaweni ye- $ 1.100 yezigidigidi